Ezona zihluzo zilungileyo zeAquaClear zamanzi, yeyiphi oyikhethayo? | Ngeentlanzi
Iifilitha ze-AquaClear ziya kuvakala njengaye nabani na okhe wakho kwihlabathi le-aquarium ithutyana, kuba lolunye lweempawu ezaziwayo nezona zinamava ekucoceni i-aquarium. Iifilitha zobhaka zazo, ezikwabizwa ngokuba ziingxangxasi, zixatyiswa ngakumbi kwaye zisetyenziswa luluntu luphela.
Kweli nqaku Siza kuthetha ngeefayile ze-AquaClear ngokunzulu, Siza kuncoma ezinye zeemodeli zabo, siza kubona iinkcukacha zabo kwaye siya kukufundisa nendlela yokuzicoca. Sikwacebisa ukuba ufunde eli nqaku linxulumene noko Isihluzo se-osmosis se-aquarium, yonke into ekufuneka uyazi.
1 Iifilitha ezigqibeleleyo zeAquaClear
1.1 I-AquaClear 20
1.2 I-AquaClear 30
1.3 I-AquaClear 50
1.4 I-AquaClear 70
2 Isebenza njani isihluzi seAquaClear
3 Iindidi zeAccaClear zokuFilitha indawo yokuHlaziya
3.1 Ukucocwa koomatshini
3.2 Ukucocwa kweekhemikhali
3.3 Ukucoca izinto eziphilayo
4 Ngaba iAquaClear ilicebo elilungileyo lokucoca ulwandle lwamanzi?
5 Ngaba iifilitha ze-AquaClear zinengxolo?
6 Ucoceka njani isihluzi seAquaClear
7 Kukangaphi kufuneka utshintshe imithwalo yeefilitha?
Iifilitha ezigqibeleleyo zeAquaClear
Inkqubo yeAquaClear ye ...
I-AquaClear Carbon iyalayisha ...
Intlawulo yokuhluza iAquaClear ...
I-AquaClear A610-Inkqubo ...
Emva koko siza kubona ifayile ye- Iifilitha ezilungileyo zolu phawu. Nangona bonke babelana ngeenkcukacha ezifanayo kwaye, ewe, umgangatho, umahluko unokufumaneka ikakhulu kwiilitha eziphezulu ezinokuba nazo apho siza kufaka khona isihluzi kunye nenani leelitha ezilungiswa ngeyure:
Icebo lokucoca ulwelo linomgangatho oqhelekileyo we-AquaClear, kunye nenkqubo ethe cwaka, kwaye kunjalo iindlela zaso ezintathu zokucoca ulwandle olunamanzi olungadluliyo kwiilitha ezingama-76. Inezinga lokuhamba elisebenza ngaphezulu kweelitha ezingama-300 ngeyure. Kulula kakhulu ukuhlangana kwaye kungathathi ndawo.
Kule meko imalunga Icebo lokucoca ulwelo elivumela ukufakwa kwalo kwi-aquariums ukuya kwi-114 yeelitha, kwaye oko kunokuqhubekeka ngaphezulu kweelitha ezingama-500 ngeyure. Njengazo zonke izihluzi zeAquaClear, ithe cwaka kwaye ibandakanya iifilitha ezintathu ezahlukeneyo (ezomatshini, ezekhemikhali kunye nezebhayoloji). NgeAquaClear amanzi akwi-aquarium yakho aya kucaca gca.
Le modeli yefilitha yeAquaClear yile ziyafana kwezinye, kodwa zacetyiswa ukuba zisetyenziswe kwi-aquariums ukuya kwi-190 yeelitha. Inokuqhubekeka malunga neelitha ezingama-700 ngeyure. Njengeminye imodeli, i-AquaClear 50 ibandakanya ulawulo lokuhamba apho unokunciphisa ukuhamba kwamanzi.
Kwaye siyaphela eyona modeli inkulu yeefilitha zolu phawu, ezinokusetyenziselwa nokuba zingekho ngaphezulu okanye ngaphantsi kunee-aquariums ukuya kuthi ga kwiilitha ezingama-265. Esi sihluzi sinokuphinda sisebenze ngaphezulu kwewaka leelitha ngeyure. Inkulu kakhulu kunezinye, eqinisekisa amandla amangalisayo (kangangokuba ezinye izimvo zithi zilungelelaniselwe ubuncinci).
Isebenza njani isihluzi seAquaClear
Iifilitha ze-AquaClear ziyintoni ezaziwa njengezihluza zobhaka. Ezi ntlobo zeefilitha zikulungele ngokukodwa kwi-aquariums ezincinci neziphakathi. Zixhomekeke ngaphandle kwetanki, kwelinye lamaphethelo aphezulu (yiyo loo nto igama labo), ngenxa yoko zingathathi sithuba ngaphakathi kwi-aquarium kwaye, ngaphezulu koko, azinkulu njengezihluzo zangaphandle ezenzelwe i-aquariums ezinkulu. Ukongeza, bawisa amanzi ngohlobo lwengxangxasi, ephucula ioksijini yayo.
Isihluzi seAquaClear sisebenza njengamacebo okucoca ulwelo lolu hlobo:
Okokuqala, amanzi angena ngombhobho weplastiki kwaye ingena kwisihluzo.
Emva koko isixhobo senza ukucoca ukusuka ezantsi ukuya phezulu kwaye amanzi adlula kwiifilitha ezintathu ezahlukeneyo (ezomatshini, ezekhemikhali kunye zebhayoloji, esiza kuthetha ngazo kamva).
Nje ukuba kwenziwe ukuhluza, Amanzi abuyela umva kwi-aquarium, eli xesha licocekile kwaye alinakucola.
Into enomdla malunga neefilitha zolu phawu lubalaseleyo kukuba zibandakanya, ukongeza kwiifilitha ezintathu ezahlukeneyo, a ulawulo lokuhamba apho unokunciphisa ukuhamba kwamanzi ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-66 (umzekelo, xa usondla iintlanzi zakho). Isicoci seemoto asiyeki ukusebenza nangaliphi na ixesha, kwaye nokuba ukuhamba kuncitshisiwe, umgangatho wamanzi acociweyo nawo awunciphi.
Iindidi zeAccaClear zokuFilitha indawo yokuHlaziya
Njengoko besitshilo ngaphambili, Iifilitha ze-AquaClear zineenkqubo ezintathu zokucoca ukususa konke ukungcola wamanzi kwaye uwashiye acoceke kangangoko.
Nguye ukuhluza okokuqala okukhaba xa icebo lokucoca ulwelo lisebenza, ngaloo ndlela libambisa ukungcola okukhulu (ezinje, umzekelo, intsalela yombungu, ukutya, isanti emisiweyo ...). Ngombulelo kukucoca ngomatshini, amanzi awahlali ecocekile kuphela, kodwa afikelela nakwisihluzo sebhayoloji ngeyona ndlela ifanelekileyo, esona sihluzi sinzima kwaye siethe-ethe kwezi zintathu. Kwimeko ye-AquaClear, esi sihluzo senziwe ngogwebu, eyona ndlela yokufumana ezi ntsalela.
Ngasentla nje kwegwebu elenza uhluzo lomatshini sifumana ifayile ye Ukucocwa kweekhemikhali, kubandakanya ikharbon eyenziweyo. Le nto yenziwa yile nkqubo yokuhluza kukuphelisa amasuntswana amancinci anyibilikiswe emanzini. Umzekelo, iluncedo kakhulu xa ufuna ukucoca amanzi emva kokunyanga intlanzi, kuba iyakususa naliphi na iyeza elishiyekileyo. Kwakhona kusebenza ekupheliseni ukuvumba. Icebo lokucoca ulwelo alukhuthazwa ukuba lisetyenziswe kumanzi anamanzi amatsha.
Ukucoca izinto eziphilayo
Ukuhlawuliswa kweAquaClear ...
Ekugqibeleni sifika kolona cwecwe lubuthathaka, olwebhayoloji. Kwaye ibhaktheriya ehlala kwi-Biomax, iityhubhu zeceramic ezisetyenziswa yi-AquaClear kwesi sihluzo, zinoxanduva lokucoca ulwelo. Iibhaktheriya ezigcinwe kwii-canutillos zinoxanduva lokuguqula amasuntswana eza kuzo (umzekelo, ukusuka ekuboliseni izityalo) kwizinto ezinobungozi obuncinci ukugcina i-aquarium yakho isempilweni kwaye iintlanzi zakho zonwabile. Ukongeza, i-filtration yebhayiloji ekubonelelwa yi-AquaClear inethuba lokuba inokusetyenziswa kuzo zombini ii-aquariums zamanzi amatsha netyuwa.
Ngaba iAquaClear ilicebo elilungileyo lokucoca ulwandle lwamanzi?
I-AquaClear ngokungathandabuzekiyo a uphawu oluhle kakhulu kubo bobabini abasandula ukuqala kunye neengcali kwihlabathi lee-aquariums. Ayisiyiyo kuphela ngenxa yokuba iluphawu olunembali eninzi kwaye ikwafumaneka kwiindawo ezininzi (nokuba zikwi-intanethi okanye kwiivenkile ezibonakalayo zezilwanyana, umzekelo) kodwa ngenxa yokuba izimvo ezandayo kwi-intanethi zonke zinamanqaku amaninzi eziqhelekileyo: ukuba ziyi-brand yakudala, enamava amaninzi okucoca ulwakhiwo, olukumgangatho ophezulu kwaye lubeka inkathalo enkulu kwiimveliso zalo.
Ngaba iifilitha ze-AquaClear zinengxolo?
Iifilitha ze-AquaClear zidume ngokuthula kakhulu. Nangona kunjalo, kuqhelekile ukuba bakhale ngeentsuku zokuqala zokusetyenziswa, njengoko kusafuneka bathabathe ifilimu.
Icebo ukuze lingavakali kangako kukuzama ukuba icebo lokucoca ulwelo aliphumli kwiglasi ye-aquarium, kuba Amaxesha amaninzi lolu qhakamshelwano lubangela ukungcangcazela nengxolo, ezinokuba yinto ecaphukisayo. Ukwenza oku, beka isihluzo kwiglasi, umzekelo, ngokufaka amakhonkco erabha. Indawo ekucocwe kuyo ibalulekile ukuze ingangxoli kakhulu, kufuneka ithi tye ngokupheleleyo.
Okokugqibela, ukuba iyaqhubeka nokwenza ingxolo eninzi, kuyacetyiswa ukuba ujonge ukuba inayo intsalela eqinileyo (enjengomgutyulo okanye inkunkuma) ihleli phakathi kweinjini kunye neshafti yemoto.
Ucoceka njani isihluzi seAquaClear
Iifilitha ze-AquaClear, njengazo zonke izihluzi, kufuneka icocwe amaxesha ngamaxesha. Nangona kufuneka uyenze kangaphi kuxhomekeke kwi-aquarium nganye kunye nomthamo wayo, uya kuhlala uyazi ukuba lixesha lokucoca xa ukuphuma kwendawo kuqala ukuhla (ngesiqhelo kwiiveki ezimbini) ngenxa yenkunkuma eqokelelweyo.
Okokuqala kuya kufuneka susa isixhobo sokucoca ulwelo ukwenzela ukuba ungafumani ntlantsi engalindelekanga okanye ngakumbi.
Después Ukuqhaqha izixhobo zokucoca ulwelo (imoto yekhabhoni, iityhubhu zeceramic kunye nesiponji sokucoca ulwelo). Ngapha koko, iAquaClear sele ibandakanya ibhasikithi entle ekucocwa kuyo yonke into akufuneki ithathe ngaphezulu kwemizuzu emihlanu.
Beka ezinye Amanzi e-aquarium kwisitya.
Kubaluleke kakhulu ukuba usebenzise amanzi e-aquarium ukuya ukucoca isiponji kunye nezinye izinto isihluzo. Ngaphandle koko, ukuba umzekelo usebenzisa amanzi etephu, ezi zinokungcoliseka kwaye isihluzo sinokuyeka ukusebenza.
Kubalulekile ukuba uyenze kwakhona Beka yonke into apho ibichaneke khonaNgaphandle koko, isiciko asizukuvala ngokufanelekileyo, ke isihluzo sinokuyeka ukusebenza ngokufanelekileyo.
Ekugqibeleni, ungaze ufake iplagi uze uyiqhube yomeNgaphandle koko kukho ingozi yokuba iya kutshisa kakhulu kwaye itshise.
Kukangaphi kufuneka utshintshe imithwalo yeefilitha?
Ngokwesiqhelo Imithwalo yeefilitha kufuneka itshintshwe amaxesha ngamaxesha ukwenzela ukuba icebo lokucoca ulwelo liqhubeke nokwenza umsebenzi walo ngokuchanekileyo, kungenjalo isixa sobutyobo esiqokelelweyo sinokuchaphazela umgangatho wefiltrate kunye nokuhamba kwamanzi. Nangona, njengesiqhelo, kuxhomekeka kakhulu kumthamo we-aquarium, eyona ixhaphakileyo yile:
Guqula i isiponji qho emva kweminyaka emibini okanye njalo, okanye xa incangathi kwaye yaphuka.
Guqula i icebo lokucoca lekhabhoni kanye ngenyanga okanye njalo.
Los Iigrama zeceramic ngokubanzi akufuneki zitshintshwe. Okukhona ibacteria ikhula kakuhle, kokukhona baya kuwenza umsebenzi wabo wokucoca!
Iifilitha ze-AquaClear sisisombululo esisemgangathweni sokucoca i-aquarium yakho Zombini ii-newbies zeli lizwe kunye neengcali, kunye nabo bane-aquarium enobukhulu obulinganiselweyo okanye abo banokukhuphisana nolwandle uqobo. Sixelele, zeziphi iifilitha ozisebenzisayo kwi-aquarium yakho? Ngaba ucebisa nayiphi na? Ngawaphi amava oye waba nawo ngeli gama?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Iifilitha zeAquaClear